मेन्छ्यायेमको प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार «
जिल्ला – तेह्रथुम
स्थानीय तह – मेन्छ्यायेम गाउँपालिका
केन्द्र – मोराङ बजार
क्षेत्रफल – ७०.०९ वर्ग कि.मि.
वडा संख्या – ६ वटा
अध्यक्ष – यादवप्रसाद खापुङ
उपाध्यक्ष – गीतादेवी तिम्सना गौतम
मेन्छ्यायेम गाउँपालिका, प्रदेश १ स्थित तेह्रथुम जिल्लाको उत्तर–पूर्वी गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका ७०.०९ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । दुर्गम तर मनोरम धरातलीय बनोट, उच्च भूभाग, खोलानाला र समथल बेसी तथा लालीगुराँसको घना जंगलले यस गाउँपालिकाको पर्यटकीय आकर्षण उत्तिकै बढेको पाइन्छ ।
यो गाउँपालिका इतिहासमा पनि प्रसिद्ध रहेको भनाइ किंवदन्तीमा पाइन्छ । प्राचीन समयमा तेनाहाङ राजाको दरबार, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गौखुरी धाम, मेन्छ्यायेम डाँडालगायत ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलले यस गाउँपालिकाको परिचयलाई थप फराकिलो बनाएको छ ।
राज्यको पुनर्संरचनाअनुसार स्थानीय तहको नामकरण स्थानीय पहिचान, सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय सभ्यताका आधारमा गरिएको छ । जसअनुसार यस गाउँपालिकाको नाम लिम्बू धर्म, संस्कृतिका आधारमा राखिएको छ ।
किंवदन्तीअनुसार मेन्छ्यायेमलाई तीन किसिमले परिभाषित गरिएको छ । तीन किसिमकै परिभाषा मेन्छ्यायेम डाँडामा आधारित छ । ‘मेन्छ्या’ र ‘येप’ को अपभ्रंश भएर ‘मेन्छ्यायेम रहन गएको भन्ने भनाइ किंवदन्तीमा छ ।
मेन्छ्यायेम डाँडा तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङ तीन जिल्लाको संगमस्थलमा अवस्थित छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको यही डाँडाको अर्थका आधारमा यहाँ चलिआएका धर्म–संस्कृति र रीतिरिवाजअनुसार मेन्छ्यायेम रहन गएको किंवदन्ती रहँदै आएको छ ।
यस गाउँपालिकाले पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी योजना सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष यादवबहादुर खापुङले बताए । गाउँपालिकाले तीनवटा मुख्य सडकहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ ।
मोराहाङ श्रीजङ सेकिम्बा सडक, मोराहाङ पौठाक सम्दु सडक र लालीगुराँस सडकलाई प्राथमितामा राख्दै आएको अध्यक्ष खापुङले जानकारी दिए । गाउँपालिका र वडा केन्द्रहरूसम्म सडक निर्माण भएका छन् ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार गठनसँगै पालिकाका सबै वडाका बस्तीहरूसम्म सडक निर्माण भएका छन् । सडक निर्माणसँगै सवारी साधन गाउँगाउँसम्म सञ्चालन हुँदै आएका छन् । त्यस्तै गाउँपालिकाको ६ वडामा ४ कोठे भवन निर्माण सुरु भएको छ ।
सदरमुकाम र जिल्लाको उत्तरपूर्वी क्षेत्र जोड्ने मध्यपहाडी सडक खण्डअन्तर्गत खोरङवा खोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
मेन्छ्यायेम अस्पताल निर्माणका लागि १८ करोड लागत टेन्डर गरी निर्माण चरणमा अघि बढेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत सबै विद्यालयमा नेट जडान, कम्प्युटर प्रदानका साथै शिक्षकहरूलाई कम्प्युटरसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ । माध्यमिक विद्यालयहरूमा आरामकक्षा सञ्चालनका साथै शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आईसीटी कार्यक्रम, महिला छात्राहरूका लागि छात्रा आराम कक्षा स्थापना तथा सञ्चालन र हरेक माविका शिक्षक अनुदान कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
मेन्छ्यायेम अस्पताल र श्रीजुङ र पौठाक स्वास्थ्यचौकी बर्थथिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेको छ । कृषिक्षेत्रमा किसानहरूलाई व्यावसायिक किसानहरूलाई कुखुरा, बंगुर, बोका, भेडा, राँगा, गोठसुधारलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।
गाउँपालिकाको पाँचवटा वडामा खेलमैदान निर्माण भएको छ । गरिब विपन्न परिवारलाई जस्तापाता वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
महिलाहरूलाई सशक्तीकरणका साथै विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको उपाध्यक्ष गीतादेवी गौतमले बताइन् । महिलाहरूलाई व्यावसायिक बनाउन प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकामा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षणमा जुट्न सुरु भएको छ । जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिकाका रूपमा रहेको यो गाउँपालिकामा विकासले गति लिन थालेको छ ।